आर्थिक दर्जा देशहरू: लगानीको जहाँ निर्देशन गर्न?
आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक - सकल घरेलू उत्पादन। जीडीपी लगभग सबै अवस्थामा यो आंकडा गर्न, सबै सामान र उत्पादन को सबै शाखा मा देश मा उत्पादन सेवाहरूको बजार मूल्य निर्धारण गर्न, अर्थव्यवस्था संवेदनशील देशहरूमा छ। संसारको अर्थव्यवस्था दर्जा यो र धेरै अन्य macroeconomic संकेतक को आधार मा गर्न सकिन्छ। यस लेखमा तपाईं विकसित देशहरूमा आर्थिक जीवनको धेरै पक्षहरू थाह गर्न सक्षम हुनेछ। लेख पनि संसारभरिका को "लगानी जलवायु" सहित अर्थव्यवस्था को विकास र दक्षता मा संसारको दर्जा संकेत गर्नुभयो।
संसारको गार्हस्थ्य उत्पादनको शीर्ष5स्तर
कुनै पनि देश को अर्थव्यवस्था को विकास को दर को एक उद्देश्य सूचक जीडीपी मा वार्षिक वृद्धि छ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था - विश्व बैंक डेटा-अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रकाशित दुनिया, दर्जा, पहिलो स्थान संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थव्यवस्था को एक राख्दछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका को जीडीपी हुनत "आर्थिक विकास", को दर, जीडीपी मा वार्षिक वृद्धि अनुमानित प्रतिशतको रूपमा व्यक्त, 2015 को अन्त द्वारा लगभग अमेरिकी $ 18 ट्रिलियन राशि, सानो छ। माथि गत वर्ष 23.5% आयरल्याण्ड गरेको अर्थव्यवस्था मा वृद्धि भन्दा कम छ जो लगभग 2.5% को वृद्धि, - शीर्ष पाँच र्याङ्किङ्ग समावेश थिएन जो राज्य।
चीनको जीडीपी $ 11 ट्रिलियन थियो .. चीन पनि पछिल्लो केही वर्ष मा तीव्र आर्थिक वृद्धि द्वारा विशेषता छ। जीडीपी 6% वृद्धि अघिल्लो वर्ष तुलनामा।
लगभग तीन पटक कम (चीन तुलना) हुन बाहिर गरिएका जापानको जीडीपी - बस अमेरिकी $4खरब .. जापान अग्रणी उच्च प्रविधि, चिकित्सा र फार्मेसी जस्ता उद्योग छन्।
मा 20154जर्मनीको जीडीपी अमेरिकी गर्न $ 3.36 ट्रिलियन राशि .. औद्योगिक उत्पादन र सेवा जर्मन विनिर्माण उद्योग को लागि सबै भन्दा लाभदायक बाँकी छन्।
5 अन्तमा, दुनिया मा शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्था बंद बेलायत। जीडीपी राज्य को मा 2015 2.86 ट्रिलियन डलर को राशि, संयुक्त राज्य अमेरिका, र वार्षिक वृद्धि -। बारे 2%। यो संयुक्त राज्य राम्रो उदाहरण हो भनेर टिप्पण लायक छ अर्थव्यवस्था को राज्य विनियमन आदर, यो लगभग उच्च आर्थिक परिणाम निम्त्याउँछ जुन न्यूनतम छ (मोडेल भन्न)।
देश को "लगानी छवि" धेरै महत्त्वपूर्ण कारक बनेको छ। सिर्जना गरेका विश्व लगानी दर्जा विश्लेषणात्मक एजेन्सीहरू अग्रणी कारक को totality छलफल भएको। पहिलो जीडीपी सहित macroeconomic संकेतक, साथै प्रविधि विकास र नागरिक जीवित स्तर संग व्यवहार गर्नुभयो। लगानीको लागि अर्थव्यवस्था को आकर्षण को मूल्यांकन को लागि आधार एक जोखिम अनुपात र फिर्ती बन्नेछ।
देश को लगानीकर्ताले गर्न अनुकूल
विदेशी लगानी को सम्बन्ध मा दुनिया को वर्तमान स्तर, गरिएको छ "विश्व बैंक"। सायद परिणाम केही तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ।
विदेशी लगानीको स्तर द्वारा पहिलो स्थानमा स्तर चीन छ। यसको ठूलो आर्थिक क्षमता तेज बढ्दै अर्थव्यवस्था को एक मालिक हुनुको साथ र, राज्य justifiably थप $ भन्दा 347 अर्ब अमेरिकी डलर प्रति वर्ष आकर्षित गर्छ।।
दोस्रो स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिका गए। कुल लगानीको 295 अर्ब डलर वरिपरि वर्ष छ। यो सरकार र निजी क्षेत्र प्रदान गर्दछ जो अचल सम्पत्ति, को ठूलो विकल्प छ। साथै, पछिल्लो केही वर्ष सम्पत्ति यस प्रकारको लागि मूल्यहरु मा एक कमी द्वारा विशेषता छ।
हङकङ लगानीको सबै भन्दा ठूलो शेयर निर्माण थियो पाउँछ। एक हङकङ को मुख्य आर्थिक सूचकहरू को - जीडीपी मा 2015 लगभग $ 330 अर्ब राशि ..
को नर्डिक देशहरुमा - लगानीको लागि न्यानो जलवायु
मा लगानीको विश्व दर्जा आर्थिक देशहरूमा क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा रूस र क्यानाडा राखे। यी दुई राज्य को लगानी आकर्षण पछिल्लो 10-15 वर्ष मा एक महत्वपूर्ण माथितिर प्रवृत्ति थियो। 2013 मा, रूस झन् को विदेशी लगानी मामलामा पहिलो स्थिति नजिक यो केवल चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका को अगाडी र्याङ्किङ्ग। रूस - यो संक्रमण (राज्य विनियमन उपकरण को परिवर्तन, आदि) सँग सम्बन्धित सबै जोखिम बाबजुद, लगानीकर्ताले को सबै भन्दा ठूलो संख्या आकर्षित गर्न व्यवस्थित छ जो, संक्रमण मा अर्थव्यवस्था, एक देश। जे भए पनि, त्यहाँ उदाहरणका लागि, त्यहाँ अझै पनि अफशोर कम्पनीहरु लगानी गर्न कोष-हुर्काउन को एक उच्च अनुपात छ, महत्वपूर्ण कमियां पनि हो रूस मा निवेश छ।
क्यानाडा सन्दर्भमा - यो देश स्थिर औद्योगिक शक्ति हुन मानिन्छ, लगानीकर्ताले क्यानाडा अर्थव्यवस्था आफ्नो धन लगानी सुरक्षित महसुस गर्छन्। यो बढुवा र क्यानाडा लोकतन्त्र र एकदम कम अपराध दर विकास गरिएको छ। क्यानाडा मा रियल एस्टेट नागरिक र विदेशीहरू रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ। क्यानाडा को कानूनी प्रणाली पनि वर्ष पछि विदेशी लगानी, वर्ष थप आकर्षक अर्थव्यवस्था को स्तर बढाउँछ।
रूस गणतन्त्र: वर्णमाला क्रममा सूची
एक सम्भाव्यता अध्ययन के छ?
नलसाजी "अमेरिकन" - के यो छ र यो कहाँ लागू हुन्छ?
"Tartuffe" कार्यकारी सारांश। Moliere गरेको प्रतिभा को प्रतिबिम्ब
को काँध को Dislocation: छिटो उपाय
व्यावसायिक बैंकहरू को लिक्विडिटी
ब्रश सीमा: आवेदन, आयाम, फोटो
आहार 1 तालिका: हप्ताको, सङ्केत गर्छ र contraindications लागि मेनु
संसारको पहिलो क्रलर ट्रेक्टर
बुनाई कागज - प्रतिभाशाली, अद्वितीय, सुरुचिपूर्ण
हास्यास्पद अभिव्यक्ति र वाक्यांश। हास्यास्पद क्याच वाक्यांश
तपाईं यो सम्झना हो कि फिटनेस प्रशिक्षकहरु सपना